Sandals Resorts Wedding: Vahaolana "Perfect Perfect."
Home » Vaovaom-panambadiana tantaram-pitiavana tantaram-pitiavana » Sandals Resorts Wedding: Vahaolana “tonga lafatra”
Nandritra izay volana vitsy lasa izay, zavatra iray no nijanona ho marina kokoa noho ny teo aloha - tsy nilavo lefona ny fitiavana, ary tsy misy koa ny nofinofin'ny mpivady hanambady. Araka ny a fanadihadiana vao haingana avy amin'ny The Knot, 80% ny mpivady efa voafaritra no mijanona eo akaikin'ny datin'ny CDC farany ary mieritreritra izay mety hisy fiantraikany amin'ny drafitra fampakaram-badin'izy ireo amin'ny ho avy. Satria mitady vahaolana ny mpivady mba hampiatoana ny andro lehibe, ny fomba fampakaram-bady kely kokoa dia mirongatra ankehitriny ary ny fikasana ny toerana akaiky ny fanambadiana Sandals Resorts dia mety ho vahaolana lavorary avelany handeha ny voady.
Ny mpivady dia mitady vahaolana tsy misy fihenjanana sy fotoana maharitra hanatanterahana ny drafitry ny mariazy mandritra ny areti-mifindra. Izany no antony mahatonga ireo mpitarika amin'ny fampakaram-bady sy fampakaram-bady ho any Sandals Resorts dia manolotra safidy maromaro hanampiana ny mpivady hanonofy ny fankalazana ny mariazy tonga lafatra.
Fampidirana serivisy mivantana amin'ny lanonana mivantana amin'ny alàlan'ny 2021
Hatramin'ny nanombohan'ny areti-mifindra dia tsy maintsy nandray fanapahan-kevitra henjana ny mpivady, na ny fanemorana ny mariaziny lehibe na ny fampihenana ny mpanatrika mba hahatratra ny torolàlana farany an'ny CDC. Ankehitriny, ny mpanambady sy ny mpampakatra dia tsy mila misafidy amin'izy roa rehefa manoratra mariazy ho any amin'ny iray amin'ireo 18 Sandals and Beaches® Resorts any Caribbean. Ireo mpivady rehetra izay mamandrika mariazy na ReTie the Knot® manomboka ny 15 septambra 2020 hatramin'ny 31 desambra 2020, miaraka amina drafitra hanambady amin'ny 2020 sy 2021, dia hahazo Serivisy mivantana mivantana amin'ny lanonana mivantana amin'ny mariazy, amin'izay ny fianakaviana sy ny namana dia afaka - saika - tafiditra ao anatin'io fotoana manokana io rehefa miteny ny mpivady hoe "Ataoko".
Saika ny fitaovana fanaovana drafitra fampakaram-bady rehetra ho an'ny mpanambady sy ny mpampakatra mba hanonofinofy ny andro lehiben'izy ireo eo an-trano
Fitsangatsanganana nomerika 360-degree: “Mandehandeha” mamaky ny sasany amin'ireo trano fandraisam-bahiny tsara tarehy Luxury Included® any Karaiba. Tsy mora kokoa ny nitady toeram-pialan-tsasatra sy ny tokotaniny, manome ny fijeriny ny efitranon'i Sandals, ny morontsiraka ary ny dobo mivelatra mba hananganana sehatra fampakaram-bady tonga lafatra sy ny fanombohan'ny volan-tantely tonga lafatra.
Traikefa amin'ny famolavolana mariazy virtoaly: "Mifanena" mpanamboatra fampakaram-bady Sandaly sy Beaches raha mbola nentina saika ho any amin'ny efitrano fampakaram-bady azo namboarina ary hijery ireo safidy décor tsy misy farany azo atao amin'ny lanonana sy fandraisana olona, ​​mahita ny aingam-panahy tonga lafatra amin'ny andro lehibe.
Fitaovana fanaovana fampakaram-bady nomerika farany: Mikaroha amin'ny alàlan'ny fanolorana fampakaram-badin'i Sandals isaky ny nosy sy toerana mahafinaritra ahafahana misafidy, hatramin'ny serivisy volo sy makiazy ho an'ny tena andro fampakaram-bady.
Sary fankalazana tonga lafatra azo ekena miaraka amin'ny toro-làlana CDC ao an-tsaina
Miaraka amin'ny torolàlana CDC vaovao miantso fivoriambe kely tsy mihoatra ny 50, tapa-kevitra i Sandals fa hanova ny fankalazana ny mpivady mandritra ny androm-piainany ho zavatra lehibe kokoa aza.
Lovebirds roa Elopement: Elope to paradisa ary hahazo aingam-panahy avy amin'ny iray amin'ny Sandals ' inspirations na manonofy ny andro lehibe hatramin'ny voalohany Kapa amin'ny fampakaram-bady azo ampifanarahana. Na inona na inona safidin'ny mpivady, ny fampakaram-bady rehetra dia miaraka amin'ny haingo mihaja indrindra sy ireo fampakaram-bady rehetra amin'ny Sandals - manomboka amin'ny cocktails sonia sy ny sakafo maraina eo am-pandriana miaraka amin'ny mimosa, hatramin'ny sary fampakaram-bady 5 × 7 sy maro hafa.
Ny folo minitra tonga lafatra: Ny mpivady dia afaka manasa olon-tiana valo hanatevin-daharana ny fety rehefa mifanakalo voady any amin'ny toerana mahafinaritra any Karaiba any Sandals. Manambadia amin'ny toerana fanaovana lanonana fampakaram-bady mahafinaritra sy miafina, manomboka amin'ny trano malalaka sy ivelan'ny rano ka hatramin'ny zaridaina tsara tarehy, mankafy fandraisana cocktail adiny iray miaraka amina divay mamirapiratra mahafinaritra, mahazo 15% manokana amin'ny Red Lane® Fanandramana spa ho an'ny mpampakatra sy maro hafa. Fanampin'izany, ny famandrihana efitrano fivezivezena roa dia manome safidy ho an'ny mpivady a Lakolosy sy sioka fanatsarana - manampy fanampiny fanampiny hahazoana izay tian'ireo vahiny bar sangria!
Microwedding 50 mamy indrindra: Ny mpivady mitady hamatotra ny fatotra miaraka amina mikrôlima akaiky eo ambanin'ny vahinin'ny 50 isaky ny torolàlana farany CDC dia afaka manokana ny fankalazana ataon'izy ireo araka ny tiany. Ny fampakaram-bady rehetra voalamina miaraka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny 20 na mihoatra dia miaraka amin'ny fampidirana am-panambadiana Sandals rehetra miaraka amin'ny safidin'ny fanatsarana Bells & Whistles telo, miaraka amin'ny fisafidianana antoko-pisotroana cocktail tonga soa hanombohana ny fety, lobster Global Gourmet ™ 5-Star fandraisana hariva, hariva ary lalao alina, na koa trosa $ 1,000 mankany amin'ny Island Routes Catamaran Cruise sy maro hafa.
Fankalazana Sequel: Na dia aorian'ny fampakaram-bady sy tantely aza dia manome fotoana manokana ho an'ny mpivady hiverina sy hankalaza ny Sandals. Manomboka amin'ny fandaharam-pankalazana ny tsingerintaona malaza izay manolotra fijanonana mandritra ny alina maimaimpoana ho an'ny mpivady namandrika 7 alina na mihoatra tao amin'ny efitrano Club na Butler ka hatramin'ny fankalazana indray miaraka amin'ny namana sy fianakaviana miaraka amin'ny minitra kely ReTie the Knot® ho an'ny vondrona efitrano 5 na mihoatra.
Ny Sandals dia mirehareha amin'ny toerana fampakaram-bady tokana indrindra toa ny Chapelle Wedding Serenity Over-the-Water sy ny gazebos amoron-dranomasina - ahafahana manao lanonana akaiky sy malalaka ary fankalazana izay tadidin'ny mpivady sy ny olon-tiany foana. Fanampin'izay, ny mpivady dia afaka mamandrika a WeddingMoon ary avelao ny volan-tanterany hanomboka ny faharoa hoy izy ireo hoe: “Ataoko!”, ary manamora kokoa ny mankalaza fitiavana mandritra ny androm-piainany ao amin'ny iray amin'ireo efitrano malalaky ny karazan'olona any Karaiba.
Ny fiainana manokana dia ny New Luxury
Tsy ny Sandals ihany no manolotra fijanonana tsy misy ahiahy, fa ny orinasa dia niorina tamin'ny fitsipiky ny famoronana tontolo romantika - miaraka amin'ireo trano fandraisam-bahiny midadasika manerana ny morontsiraka midadasika - izay ahafahan'ny mpivady manantena ny tsiambaratelo sy ny tantaram-pitiavana faratampony, na amin'ny andro mariazin'izy ireo izany na amin'ny ankapobeny. ny volan'izy ireo.
Ny mpivady dia afaka manambady amin'ny fahatokisana indrindra ny marika matoky an'i Sandals. Miaraka amin'ny lohahevitra ara-pahasalamana sy ara-pahasalamana ho an'ny tsirairay izao, ny fepetra fanadiovana nohatsaraina izay napetraka tao anatin'ny Sandal Platinum Protocols ny fahadiovana hanome fiadanam-po ny mpivady, hanome toky azy ireo rehefa manomana ny andro lehibe izy ireo.
Sandals Resorts dia manome toky ny mpanambady sy ny mpampakatra ankehitriny fa ny voady dia tsy maintsy tohizana amin'ny fanomezana vahaolana "tena lavorary" ho an'ireo mpivady mpivady. Raha te hahalala bebe kokoa momba ny programa fampakaram-bady any Sandals sy ny Serivisy Fanambarana mivantana ny serivisy mivantana misy manomboka amin'ny 15 septambra, tsidiho azafady https://www.sandals.com/weddings/. Ho an'ny fepetra sy fepetra rehetra, tsidiho azafady: https://www.sandals.com/disclaimers/wedding-terms-and-conditions/.
Aeroflot an'i Russia dia manohy ny sidina mankany Mosko avy any amin'ny 'firenena maromaro'